युरोप युरोप भनेर पागल नबन्नोस ! १० लाख खर्च, २५ हजार कमाइ यहि हो पोल्याण्ड,पोर्चुगल लगायतका युरोपियन देशको वास्तविकता ! हजारौ नेपालीको बिचल्ली « Sajha Page
वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपियन देश नेपाली युवाहरुका लागि ‘ड्रिम’ हुन सक्छ। लाखौं खर्च गरेर त्यहाँ पुग्ने नेपालीको संख्या यसरी बढिरहेको छ कि मेनपावरमा पैसाको चलखेल मात्र होइन नेताहरुकै ‘सोर्सफोर्स’सम्म चल्ने गर्छ।
जसमध्ये एक हुन् हेटौंडाका बसन्त लामा। जो सुकेधारास्थित स्पेस मेनपावरलाई ८ लाखभन्दा बढी बुझाएर डेढ महिनाअघि पोल्यान्ड पुगे। त्यहाँबाट अन्य देश जाने र त्यहाँको आइडी हात पार्ने उनको सपना थियो।
तर, एक महिना पनि उनले त्यहाँ काम गर्न सकेनन्। गत साता भागेर आएका उनी भन्छन्, ‘युरोपमा जागिरेको अवस्था सोचेभन्दा आकाश–जमिनको फरक रहेछ। त्यहाँको गल्ली गल्लीमा नेपालीको बिचल्ली देखें।’
युरोपियन देशहरु पोल्यान्ड, चेक रिपब्लिक, लिथुएनिया, पोर्चुगल लगायत देशमा मेनपावर कम्पनीहरुले सरकारबाट अनुमती लिएर नै कामदार पठाउँदै आएका छन्।
तर, त्यहाँ पुर्‍याएपछि श्रम सम्झौताभन्दा अर्काे काम लगाउने र श्रम शोषण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको पीडितहरु बताउँछन्। प्रहरीमा समेत यससम्बन्धी उजुरी बढ्दै गएको छ।
युरोपियन देशमा पठाउने भनेपछि कामदारहरु जति पनि रकम तिर्न तयार हुने गरेका छन्। जसकारण मेनपावर कम्पनीले त्यहाँका सामान्य कम्पनीसँग सम्झौता गरेर कामदार पठाइरहेका छन्। ठूलो सपना बोकेर त्यहाँ पुग्ने युवाहरु पोर्चुगल र चेक रिपब्लिकका कम्पनीमा पुगेपछि बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन्।
मासिक ४० देखि ५० हजारसम्म कमाइ हुने र त्यसमध्ये आधा खान र बस्नमै खर्च हुने गरेको छ। अर्काेतर्फ काम पनि असाध्यै जोखिमपूर्ण हुने भएकाले नेपालीहरु त्यहाँ समस्यामा परेका छन्।
उनीहरुले नक्कली भिसा लगाएर टर्की पु¥याएर युवालाई अलपत्र बनाएको सिआइबीका एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए। चाबहिलमा रहेको पिपी मिराकल कन्सलटेन्सीमार्फत उनीहरुले प्रतिव्यक्ति ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएर टर्की पठाएका थिए।
‘त्यहाँ लगेर हामीलाई काठ बोक्न लगाइयो,’ सिआइबीमा भेटिएका एक पीडितले भने, ‘युरोप छिर्ने सपनामा टर्की पुगेका धेरै जनाको बिचल्ली भएको छ।’
बसन्त लामा, हेटौंडा | सुकेधाराको स्पेस ओभरसिज मेनपावरबाट म २४ नोभेम्बरमा पोर्चुगल गएको हो। श्रम स्वीकृति लिएरै म त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यहाँ गएपछि अन्य युरोपेली देशमा पुगेर लाखौं कमाउन सकिन्छ भन्ने सपना थियो। तर, त्यहाँ पुगेपछि वास्तविकता थाहा भयो।
श्रम सम्झौता नै लिएर त्यहाँ गइएको थियो। लोडर चलाउने सम्झौता थियो, तर फर्निचरमा काठ बोक्ने काम लगाइयो। ५० हजार रुपैयाँ जति तलब हुन्थ्यो। काम साह्रै गाह्रो। २०–२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बच्दैन थियो।
ती देशमा आर्थिक मन्दीपछि त्यहाँका मान्छे काम गर्न अरु देशमा जाँदा रहेछन्, अनि अन्य देशबाट ल्याएर सस्तोमा काम लगाइने रहेछ। जसकारण त्यहाँ राम्रो काम र तलब पाउने सम्भावना निकै कम छ।
त्यसकारण मैले तीन हप्तापछि नै काम छोडें। करिब डेढ महिना युरोप बसेपछि १० जनवरीमा म काठमाडौं आएको हुँ। मेनपावरको मुख्य एजेन्टलाई मैले पैसा हालिदिएको थिएँ।
फर्केपछि प्रहरीमा उजुरी गरेपछि उनीहरुले पैसा फिर्ता गर्छु भनेका छन्। मसँगै गएका कतिपय साथी त्यहीँ छन्। कोही अन्य देशमा भाग्ने प्रयासमा छन्।
युरोपको जागिर धेरै नै गाह्रो रहेछ। यत्रो लाखौं बुझाएर त्यहाँ गएर दुःख गर्दा पनि खर्च नै उठाउन नसकिने स्थिति छ। पोर्चुगल र चेक रिपब्लिकका गल्लीगल्लीमा धेरै नेपालीको बिजोग देखें। युरोपको रोजगारी त खाडीको भन्दा पनि खत्तम रहेछ। – नेपाललाइभबाट